Sajhasabal.com |युएईद्वारा भिजिट भिषामा कडाई, यस्तो छ नयाँ व्यवस्था
विदेशबाट नेपाल आउने १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बसे/नबसेको अनुगमन गरिने
पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोनाका कारण २४ जनाको मृत्यु, १७९० संक्रमित थपिए
६ वर्षीया बालिका हत्या प्रकरण : प्रदर्शनकारीमाथि गोलि प्रहार
कोरोना भाइरसका कारण सशस्त्र प्रहरीका इन्सपेक्टरको मृत्यु
बीबीसीले सार्वजनिक गरेको १०० प्रभावशाली महिलाको सूचिमा नेपालकी सपना रोका
नेप्से परिसूचक १८ सय नाघ्यो
आज सुनको मूल्य १८ सयले घट्यो,कति पुग्यो प्रतितोला ?
आजको विनिमयदर कुन देशको कति ?
युरोपमा कोरोनाको तेस्रो लहर आउने डब्ल्यूएचओको चेतावनी
मलेसियामा टप ग्लोव्सका कम्पनी बन्द हुने, २ हजार भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण
कार्त्तिक १, काठमाडौं । संयुक्त अरव ईमिरेट्स (युएई) ले नेपालबाट भिजिट भिषा (पर्यटक भिषा) मा आउनेहरुका लागि नयाँ व्यवस्था गरेको छ । नेपालसँगै भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशबाट युएई आउनेहरुका लागि नयाँ व्यवस्था अवलम्वन गर्न आफूहरुले निर्देशन प्राप्त गरेको हवाई कम्पनीहरु तथा ट्राभल एजेण्टहरुलाई उधृत गर्दै स्थानीय सञ्चार माध्ममा समाचार प्रकाशित भएको छ ।
गल्फ न्यूजका अनुसार सयौं व्यक्ति दुवई एयरपोर्टमा अलपत्र परेपछि नयाँ व्यवस्था लगाइएको हो । पाकिस्तान तथा भारतबाट युएई आएका सयौ व्यक्ति कोभिड १९ सम्वन्धी आवश्यक कागजात विना नै आएका भन्दै विमानस्थलमा नै रोकिएका छन् । उनीहरुलाई स्वदेश फर्काउन थालिएको छ ।
यसैगरी भिजिट भिषामा युएई आउनेहरुसँग कम्तिमा २ हजार दिरहम साथमा हुनुपर्ने नियम समेत लगाइएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार नेपाल लगायतका ति मुलुकबाट भिजिट भिषामा युएई आउनेहरुसँग दुईतर्फी हवाई टिकट साथमा हुनुपर्नेछ । यदि कुनै व्यक्तिले युएई प्रवेशको अनुमति प्राप्त गर्न नसकेमा उसलाई सम्वन्धीत व्यक्ति आएकै मुलुक फिर्ता लैजाने दायित्व सम्वन्धीत विमान कम्पनीको नै हुने जनाइएको छ ।
नेपालले यस अघि देखि नै भिजिट भिषामा जानेहरुसँग दुई तर्फी टिकट हुनुपर्ने व्यवस्था लागु गर्दै आएको छ । तर पनि आकर्षक रोजगारीको अपेक्षामा तथा युएई हुँदै अन्य मुलुक जान चाहनेहरु भिजिट भिषामा जाने गरेका छन् । भिजिट भिषाको नाममा हुने मानव तस्करी रोक्न विभिन्न समयमा आवाज उठ्दै र केहि प्रयत्न हुँदै आएको भएपनि यो रोकिएको छैन ।